चिकित्सा शिक्षामा शुल्क आतंक : फिर्ता हुने कहिले ? « Dainiki
चिकित्सा शिक्षामा शुल्क आतंक : फिर्ता हुने कहिले ?
२९ कात्तिक, काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बाहेक विविध शीर्षकमा ठूलो रकम असुल्दा चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थी चर्को मर्कामा परेका छन् । विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुलेर मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले दादागिरी देखाउन भने छाडेका छैनन् ।
अतिरिक्त शुल्क आतंकले विद्यार्थी अभिभावकलाई चिकित्सा शिक्षा निल्नु न ओकल्नु भएको छ । सरकारी निर्णयसमेत समयमा कार्यान्वयन नहुँदा निराशा छाएको छ । मेडिकल कलेजले बढी शुल्क फिर्ता गर्ने सुरसारै गरेका छैनन् ।
सरकारले तोकेभन्दा मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग ५ लाखदेखि २२ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिएका छन् । शुल्क फिर्ता गराउन विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलित भए पनि प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुल्क फिर्ता दिन गरेको निर्णय पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले सरकारले तोकिएको शुल्कभन्दा २२ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क उठाएकै कारण विद्यार्थी आन्दोलित हुनु परेको जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति : २९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०८:०३